GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Mgbe ọ bụla m jikechara ịgawa ebe m na-aga, m na-agbanye egwú. M banye n’ụgbọala, m gbanye egwú. Mgbe ọ bụla m nọ n’ụlọ na-ezu ike, na-ehicha ihe ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ, m na-akpọnye egwú. M na-ege egwú mgbe ọ bụla.”—Carla.
“Ọ bụrụ na obi adịghị m mma, m gbanyehaala egwú kacha atọ m ụtọ, obi na-adị m mma ozugbo.”—Mark.
“E nwere otu egwú ọ na-abụ m nụ, m cheta ihe mere m obi ụtọ n’oge gara aga. Obi na-adị m ezigbo ụtọ mgbe ọ bụla m nụrụ egwú ahụ.”—Sheila.
“Mgbe m gara otu mgbakọ mba niile nke Ndịàmà Jehova, anyị mmiri gbara m mgbe ndị niile bịara ya na-abụ abụ mmechi. Anyị niile na-asụ asụsụ dị́ iche iche, ma abụ ahụ mere ka anyị dịrị n’otu.”—Tammy.
“Ịmụ otú e si eji ngwá egwú akụ egwú na-eme ka mmadụ mụta inwe ndidi. Ọ bụghị ihe mmadụ na-amụta ngwa ngwa. Naanị ihe ga-eme ka mmadụ mụta ya bụ onye ahụ inwe ndidi.”—Anna.
“O yiziri ka egwú ndị kacha ewu ewu bụ ndị na-ekwu naanị gbasara mmekọahụ rụrụ arụ. Ha anaghịzidi ezo ọnụ.”—Hannah.
“Mgbe ụfọdụ, m na-amụ anya n’abalị na-ege egwú na-eme ka m na-eche banyere ihe ndị na-eme ka ike ụwa gwụ m. Ụdị egwú a nwere ike ime ka ihe ọjọọ na-abata m n’obi.”—Tammy.
Baịbụl kwuru, sị: “Karịa ihe niile ọzọ a ga-eche nche, chebe obi gị.” (Ilu 4:23) Jụọ onwe gị, sị: ‘Egwú m na-ege ọ̀ na-eme ka m chewe ihe na-adịghị mma n’obi m?’
“Egwú ndị na-eme ka mmadụ na-ewe iwe, kpọọ ndị ọzọ asị, ma ọ bụ leda onwe ya anya na-akpatara m nsogbu. M na-achọpụta na obi anaghị adịzi m mma ma m gehaala ụdị egwú ahụ. Ndị ezinụlọ anyị achọpụtakwala ya.”—John.
“Egwú nwere ike ịgbanwe otú obi dị́ anyị, ọ bụrụkwa na anyị akpacharaghị anya, ụdị egwú ndị anyị na-ege nwere ike ịkpatara anyị nsogbu anyị na-agaghị achọpụta ruo mgbe o riri anyị isi.”—Abigail.
“Egwú i gere naanị obere oge nwere ike ịdị gị n’isi ruo mgbe ebighị ebi. N’ihi ya, ọ bụrụ na ihe a gụrụ n’egwú adịghị mma, i kwesịrị ịgbanyụ ya ozugbo. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-adịgide gị n’obi.”—Robert.